ရထားဖြင့်စပိန်: လက်မှတ်တွေထိုအပိုဝယ်ပါရန်မည်သို့ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ရထားဖြင့်စပိန်: လက်မှတ်တွေထိုအပိုဝယ်ပါရန်မည်သို့
သငျသညျစပိန်ဖြုန်းဖို့နှစ်ပတ်အတွင်းရှိပါက, လှည့်ပတ်ရဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုရထားအားဖြင့်စပိန်စူးစမ်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်. မသာဤသူသည်သင်တို့တိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်းအချို့မယုံနိုင်စရာမြင်ကွင်းများကိုမြင်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်စပိန်အတွက်မီးရထားခရီးသွားလာအလွန်ထိရောက်နှင့်လွယ်ကူသည်. အခက်ခဲဆုံးအပိုင်းရထားလက်မှတ်တွေဝယ်ယူ. သင့်ရဲ့ဝယ်ဖို့ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခု ရထားလက်မှတ်တွေ ရထားဖြင့်စပိန်သို့သွားရန်မှာအွန်လိုင်းဖြစ်သည်. ဒီလိုလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုတဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာအတော်များများရှိတယ်. သော့ကိုအသုံးပြုမှုလွယ်ကူခြင်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌သင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်တယ်တကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်ပါသည်, ဘာသာစကား, နှင့်ဘတ်ဂျက်. သင့်ရဲ့လက်မှတ်တွေကိုဝယ်ယူအစောပိုင်းသင်ယူခွင့်ပြု အားသာချက် ဖြစ်နိုင်ပါကအထူးနှုန်းထားများ၏အဖြစ်ကိုသူတို့အပြည့်အဝကြိုတင်ဘွတ်ကင်ဖြစ်လာမတိုင်မီသင်ချင်သောရထားပေါ်သို့အရသေချာအောင်.
ကြိုတင်စီစဉ်ထားပြီးကြိုတင်ငွေဖြည့်ကတ်လက်မှတ်ရရန်ကြိုတင်မှာထားပါ သင့်ရဲ့ရထားခရီးသွားထဲကအကောင်းဆုံး. ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ Two-ရက်သတ္တပတ်ခရီးစဉ် ရထားအားဖြင့်စပိန်တဝိုက်ခရီးသွားလာမှုအတွက်. ဒီသင်၏နောက်ခရီးစဉ်များအတွက်လမ်းညွှန်ဖြစ်စို့.
ရထားအားဖြင့်ကျနော်တို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးစပိန်မက်ဒရစ်ဖြစ်ပါသည် (နေ့ရက်များ 1- 3)
ဒါဟာစပိန်မြို့တော်နှင့်အဟောင်းနှင့်အသစ်နှစ်မျိုးလုံး၏ကောင်းတစ်ဦးရောနှောဖြစ်ပါသည်, ကြော့ပန်းခြံများနှင့်အတူ, မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဈေးဝယ်, vibey တွေကတော့ နှင့်သင်တန်း၏အ Malasana ဧရိယာ. မက်ဒရစ်အိမ်မှာစပိန်ထိပ်တန်းပြတိုက်အများအပြားလည်းဖြစ်ပါတယ်. အတော်များများကအိမ်သူအိမ်သားနိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုအကျင့်ကိုကျင့်. သင့်ရဲ့ဒါကြောင့်ဤမြို့၌လုပ်ဖို့သိပ်ရှိသောကြောင့်3ဤနေရာတွင်ရက်ပေါင်းကောင်းမွန်စွာသုံးစွဲပါလိမ့်မည်. ဒါဟာသင့်ရဲ့နှစ်ပါတ်ခရီးစဉ်မှအကောင်းတစ်ဦးက start ဖြစ်ပါတယ် ရထားရရှိရန်လွယ်ကူသော ဘယ်နေရာမှာမဆိုဒီကနေမှ. မက်ဒရစ် Atocha သည်ရထားဘူတာဖြစ်ပြီးတရားဝင်ရထားလမ်းကုမ္ပဏီ Renfe သို့သွားသည်, ပြီးတော့ဒီရထားလမ်းဟာအလှဆုံးတစ်ခုပါ စပိန်နိုင်ငံတွင်ရထားဘူတာ.
စန်း Sebastian (နေ့ရက်များ3- 5)
ဤလှပသောအနည်းငယ်သာမြို့စပိန်ရဲ့ဘစျက်နိုင်ငံအတွက်ဖြစ်ပြီး Biscay ၏ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ပေါ်မှာ right ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာတစ်နေ့တာအတွင်းရှိသမျှသောအာရုံကိုအရအရာနှစ်ဦးစလုံးကမ်းခြေနှင့်တောင်များကမ်းလှမ်း, ညဥ့်ကြွလာသောအခါဒါပေမယ့်သင်ကနှမွောကိုက်-size ကိုဟင်းလျာများများအတွက် pintxo အရက်ဆိုင်များစွာပျော်မွေ့နိုင်ပါလိမ့်မည်ရှိရာဟောငျးမြို့အကြောင်းကိုအားလုံးင်. ဟောငျးမြို့အတွက် pintxos နှင့်အတူအဆုံးသတ် Playa de la Concha တလျှောက်ညနေခင်းလမ်းလျှောက်လက်လွတ်မနေပါနဲ့. မက်ဒရစ်အနေဖြင့်အနည်းဆုံးအားလေးရထားနေ့တိုင်းရှိတယ်အဖြစ်ရထားအားဖြင့်စပိန်နှင့်အတူစန်း Sebastian မှရယူခြင်းလွယ်ကူသည်.
Pamplona (နေ့ရက်များ5– 6)
ဤမြို့သည်အငြင်းပွားဖွယ်၏မူလနေရာဖြစ်သည် နွားပြေး နှစ်စဉ်ဇူလိုင်လအတွင်းအရပ်တို့ကိုယူရာ, ဒါပေမဲ့ဒီထက် Pamplona ဖို့အများကြီးပိုရှိပါတယ်. ဒါဟာ၏မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အမြင်များရှိပါတယ်ဆိုလိုတယ်သော Navarre ပြည်နယ်အတွက်တောင်ထိပ်ပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးရဲ့ တောင်များနှင့်ချိုင့် အောက်တွင်. မြို့တဝိုက်လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်လှပသောဗိသုကာအတွက်ယူရန်လွယ်ကူစေသည်ရသောသေးငယ်သည်နှင့် သမိုင်း. တစ်နှစ်တစ်လျှောက်လုံးတစ်ဦးတက်ကြွဘားနှင့် Tapas မြင်ကွင်းတစ်ခုရှိပါသည်. ဟောငျးမြို့မှတဆင့်လမ်းလျှောက်လက်လွတ်သို့မဟုတ်နွားများ၏အပြေးစဉ်အတွင်းခေါ်ဆောင်သွားလမ်းကြောင်း retracing မနေပါနဲ့. နောက်ဆုံး, ဤမြို့ကိုလည်းထံမှအလွယ်တကူဖြစ်ပါသည် စန်း Sebastian နှင့်အတို ရထားစီးနင်း ကွာ.
ရထားအားဖြင့်စပိန် – ဘာစီလိုနာ မီးရထား (နေ့ရက်များ6- 9)
ဤသည်သမုဒ္ဒရာ-မြို့စပိန်အတွက်အများဆုံးလူသိများနှင့်လူကြိုက်များမြို့ကြီးများ၏တဦးတည်းဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်, ထိုသို့စိတ်ပျက်ပါဘူး! သငျသညျအနုပညာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအဘို့ရှာကြသည်ရှိမရှိ, ဗိသုကာအတတ်ပညာ, ယင်းအပေါ်ပျင်းရိရက်ပေါင်း ကမ်းခြေ, All-ညဥ့်ပါတီများသို့မဟုတ်ပဲအသစ်တခုမြို့ရှာဖွေစူးစမ်း, ဘာစီလိုနာတွင်လူတိုင်းအတွက်တစ်ခုခုရှိ. အဆိုပါ Sagrada Familia လက်လွတ်မနေပါနဲ့, ခေတ်သစ်ကမ္ဘာ့အများဆုံးသိသိသာသာအဆောက်အဦများ၏တဦးတည်းအရာဖြစ်ပါသည်. ရထားအားဖြင့်စပိန်ဘာစီလိုနာမှ Pamplona ထံမှမကြာခဏရထားကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်တစ်ခုသာရှိ လေးနာရီခရီး နှစ်ခုမြို့ကြီးများအကြား.
ဗလင်စီယာ (နေ့ရက်များ9- 10)
ရထားအားဖြင့်တိုတောင်းတဲ့စပိန်သာလျှင်ဘာစီလိုနာကနေစီး, ဗလင်စီယာကိုမကြာခဏအားဖြင့်သတိမမူဖြစ်ပါတယ် ခရီးသွားဧည့်. ဒီအသေးငယ်တဲ့မြို့ပူဇော်ဖို့အများကြီးရှိပြီးသူကနည်းနည်းစူးစမ်းလေ့လာမယ့်နေ့ရက်ကိုယူပြီးကောင်းမွန်စွာထိုက်တန်ရဲ့. ဒါဟာတဆင့်လမ်းလျှောက်ဖို့လှပသောမြို့သည်နှင့်တစ်ဦးရှိပါတယ် အံ့မခန်းရေကန် နှင့် လမ်းလျှောက်လမ်းကြောင်း. ကမ်းခြေ၏ကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်ရေးလည်းမရှိကပိုအားမစိုက်ရရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်နှင့် Albufera ပန်းခြံ. လမ်းလျှောက်လက်လွတ်မနေပါနဲ့, အဆိုပါ Turia ဥယျာဉ်မှတဆင့် run သို့မဟုတ်သံသရာ – စပိန်အတွက်အကြီးဆုံးမြို့ပြဥယျာဉ်ထဲကတစ်ခု. ဘာစီလိုနာအနေဖြင့်ဗလင်စီယာမှနေ့စဉ် run အများအပြားရထားရှိပါတယ်.
ဂါ (10 - 13)
တစ်ဦးယဉ်ကျေးမှုနှင့်အတူတစ်မြေထဲခံစားပေါင်းစပ်ပြီး ခေတ်သစ်အနုပညာ ရထားအားဖြင့်စပိန်ခရီးသွားသည့်အခါနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဖြစ်နိုင်, ဂါစပိန်နိုင်ငံရဲ့တောင်ပိုင်းကော့စ del Sol တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်. အဆိုပါမြို့လယ်အသစ်ပွနျလညျထူထောငျနှင့်အတူ Gothic အဘိဓါန်ဘုရားကျောင်းမှာနှင့်ကျဉ်းမြောင်းသောအလယ်ခေတ်လူကူးလမ်းများပေါင်းစပ်ထားသည် ခေတ်သစ်အရက်ဆိုင်များနှင့်တင်ပါးဆုံရိုးစားသောက်ဆိုင်. ဂါပတ်ဝန်းကျင်တချို့သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အမှန်တကယ်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကမ်းခြေနှင့်သာယာလှပတောင်များရှိပြီး. အဆိုပါ Gibralfaro မှတက်ပြီးလက်လွတ်မနေပါနဲ့ ရဲတိုက် အံ့ဖှယျ Andulasian နေဝင်ချိန်များနှင့်မြို့အထွက်သက်ဝင်သက်-ယူပြီးအမြင်များများအတွက်. ဗလင်စီယာကနေဂါမှနေ့စဉ်အပြေးရထားရှိပါတယ်.
https://www။youtube။com/watch?v = YNqMQz18HDM
ရှိနေပြီးအခြားနိုင်ငံ – နောက်ဆုံးတဦးတည်းရထားအားဖြင့်စပိန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်း
ရှိနေပြီးအခြားနိုင်ငံဂါထဲကနေမှသာတိုတောင်းတဲ့ရထားစီးနှင့်နည်းတူအံ့မခန်းဖြစ်ပါတယ်. ယင်းကိုကြည့်၏စိတ်ကူးတစ်ခုရမြောက်မြားစွာသမိုင်းဝင်ကာလ element တွေကိုပေါင်းစပ်သောဤမြို့၏ခံစားမိပြန်ရောမအင်ပါယာမှစဉ်းစားပါ. မွို့၌လုပ်ဖို့အများကြီးရှိပါတယ်, အဆိုပါ Arenal လေးပုံတပုံတလျှောက်တွင်လှည့်လည်မြို့ရှာဖွေစူးစမ်းရာမှ သွားရောက်လည်ပတ်ဖို့မြစ်ကမ်း အဆိုပါအလွစားသောက်ဆိုင်ဒါမှမဟုတ်မြို့ရဲ့သမိုင်းဝင်လက်စွပ်တစ်နှားတိုကျပှဲစောင့်ကြည့်. ရှိနေပြီးအခြားနိုင်ငံရဲ့ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများနှင့်Alcázarတစ်ဦးအလည်အပတ်လက်လွတ်မနေပါနဲ့, Thrones ၏ hit တီဗွီရှိုးဂိမ်းထဲကနေမြင်ကွင်းများရိုက်ကူးဖို့အသုံးပြုခဲ့သည့်. ရထားပြန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သည်အဘယ်မှာရှိမက်ဒရစ်မှဂါထံမှရှိနေပြီးအခြားနိုင်ငံနှင့်ရှိနေပြီးအခြားနိုင်ငံကနေနေ့စဉ်ဖွင့်.
ဤသည်နှစ်ပါတ်ခရီးစဉ်သင်သည်သင်၏ခရီးစဉ်ကိုအများဆုံးလုပ်ကူညီရန်နှင့်ရထားအားဖြင့်စပိန်စူးစမ်းလေ့လာပါလိမ့်မယ်. ရထားလက်မှတ်တွေ booking ပေါ်မှာငါတို့အကြံပေးချက်များသေချာသင်သွားချင်ဘယ်မှာရနိုင်ကြသည်ဖြစ်စေသင်ကိုယ်တိုင်ပျော်မွေ့နိုင်အောင်သင့်ရဲ့အားလပ်ရက်ချောချောမွေ့မွေ့အလုပ်လုပ်သောဦးမည်. နောက်ဆုံးတော့, ရဲ့ အဘို့အဘယ်သို့အားလပ်ရက်များမှာ!
သင်အခြားလိုအပ်မယ်ဆိုရင် ဥရောပရထားလက်မှတ်တွေ, ကိုယ့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ ဒီမှာ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ website ကိုသွားပါနှင့်စီးနင်းပျော်မွေ့.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fspain-by-train%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml သငျတို့သ / က de သို့မဟုတ် / ru နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများဖို့ / es ပြောင်းလဲနိုင်သည်.
ရထား ရထားခရီးသွား travelspain
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ဥရောပခရီးသွား